ခိုးရာလိုက်သွား တဲ့ သမီးဖြစ် သူ ရဲ့ စာကိုဖက် ပီး အူပါတက်တယ်… – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > ခိုးရာလိုက်သွား တဲ့ သမီးဖြစ် သူ ရဲ့ စာကိုဖက် ပီး အူပါတက်တယ်…
ခိုးရာလိုက်သွား တဲ့ သမီးဖြစ် သူ ရဲ့ စာကိုဖက် ပီး အူပါတက်တယ်…
မန်းလေးက အပြန်…မိတ္ထီလာ Max Energy မှာ ဆီဖြည့်တုန်း… အဖွား တယောက်…ငှက်ပျော်သီးလေး (၃)ဖီးကိုင်ပြီး…seemore
ခ်စ္ရပါေသာ အေမ နဲ႔ အေဖ
သမီး ခိုးရာေနာက္ လိုက္သြားပါၿပီ။
သမီးကို အေဖနဲ႔အေမတို႔ ျပဳစုေနရမွာ ႐ွက္ၿပီေတာ့ အားနာလာလို႔ပါ။
အေမတို႔ ဆင္ေပးထားတဲ့ လက္စြပ္ ဆြဲႀကႇိဳး လက္ေကာက္ ေတြကို မယူခ်င္လို႔ အိတ္နဲ႔ထည့္ၿပီး သမီးမွန္တင္ခုံေပၚမွာတင္ထားၿပီးမွ သမီးတို႔ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပရင္ အေမတို႔ပဲ့ စိတ္ဆင္းရဲမွာ စိုးလို႔ သမီးအကုန္ယူသြားပါၿပီ။ATM card ေလးလည္း ယူသြားတယ္ အေမသိတယ္မဟုတ္လားအခုေခတ္က လမ္းခရီးမွာ ေငြကိုင္ရင္ အႏၲရာယ္ မ်ားတယ္ေလ။
အသက္ကို ဉာဏ္ေစာင့္ လို႔ အေမတို႔ပဲ သင္ေပးခဲ့တာ သမီး မေမ့ဘူး။
သမီး ခ်စ္သူကလည္း ႐ိုး႐ိုးသားသားပါ။ စိတ္မပူပါနဲ႔ေနာ္။
ေယာက်ၤားေလး ဆိုေတာ့လည္း နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ေသာက္တတ္စားတတ္ တာေပါ့
အားကစားလည္း သူ ဝါသနာပါလို႔ေေဘာလုံးပြဲလည္းေလာင္းတယ္ေလ
မေကာင္းတဲ့ မိန္းမေတြနဲ႔လည္း သူ မ႐ႈပ္ဘူးတဲ့။
ေကာင္းတဲ့ မိန္းမေတြနဲ႔ပဲ့ ႐ႈပ္တာတဲ့။
ဘာပဲ့ျဖစ္ျဖစ္ သမီးကို သူခ်စ္သလို သမီးကလည္း သူ႕ကိုခ်စ္တယ္။
ဟိုေန႔ကဆို သမီးပါးမွာ ျခင္တစ္ေကာင္နားေနလို႔သမီးကို ျခင္ကိုက္မွာ စိုးရိမ္ၿပီသူ႕လက္နဲ႔ ဖ်န္းကနဲ႐ိုက္ပလိုက္တာ သြားႏွစ္ေခ်ာင္း ကြၽတ္သြားတယ္။မိဘဆိုတာ သားသမီးကို စိတ္ဆိုးလည္း ခဏတဲ့႐ြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ႐ွင္ပညာသာမိ ေျပာဖူးတယ္။
မိဘေတြက ေျမးမ်က္ႏွာျမင္ရင္ အရည္ေပ်ာ္ေရာတဲ့။ ဒါေၾကာင့္လည္း အေမတို႔အေဖတို႔ေျမးျမစ္ေတြ ေပြ႕ခ်ီႏိုင္ေအာင္ သမီးတို႔ႀကိဳးစားမွာပါ။
အေမတို႔ ဒီစာကို ဖတ္ေနခ်ိန္မွာ သမီးက ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးစီးၿပီး ဟိုးအေဝးကိုသြားေနၿပီ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။
သမီးအခု စီးေနတာ ႏြားလွည္းလိုလိုစက္အင္ဂ်င္မေကာင္းတဲ့ ဆိုင္ကယ္စုပ္ေပၚမွာပါ။
ေက်းလက္သဘာဝကို သမီး ခ်စ္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ပကာသနနဲ႔ စည္းစိမ္ဥစြာေတြကိုလည္းမမက္ေတာ့ပါဘူး။
တစ္ေန႔က်ရင္ သမီး အေဖတို႔ အေမတို႐ွိရာအိမ္ကို ဆက္ဆက္ ျပန္လာခဲ့ပါမယ္။
အေမတို႔ အေဖတို႔ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ျဖစ္ဖို႔လည္း သားသား မီးမီးေလးေတြ လက္ေဆာင္အေနနဲ႔ ျပန္လာရင္ယူလာခဲ့ပါ့မယ္…!!
ချစ်ရပါသော အမေ နဲ့ အဖေ
သမီး ခိုးရာနောက် လိုက်သွားပါပြီ။
သမီးကို အဖေနဲ့အမေတို့ ပြုစုနေရမှာ ရှက်ပြီတော့ အားနာလာလို့ပါ။
အမေတို့ ဆင်ပေးထားတဲ့ လက်စွပ် ဆွဲကြှိုး လက်ကောက် တွေကို မယူချင်လို့ အိတ်နဲ့ထည့်ပြီး သမီးမှန်တင်ခုံပေါ်မှာတင်ထားပြီးမှ သမီးတို့ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေရင် အမေတို့ပဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှာ စိုးလို့ သမီးအကုန်ယူသွားပါပြီ။ATM card လေးလည်း ယူသွားတယ် အမေသိတယ်မဟုတ်လားအခုခေတ်က လမ်းခရီးမှာ ငွေကိုင်ရင် အန္တရာယ် များတယ်လေ။
အသက်ကို ဉာဏ်စောင့် လို့ အမေတို့ပဲ သင်ပေးခဲ့တာ သမီး မမေ့ဘူး။
သမီး ချစ်သူကလည်း ရိုးရိုးသားသားပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့နော်။
ယောကျင်္ားလေး ဆိုတော့လည်း နည်းနည်းပါးပါးတော့ သောက်တတ်စားတတ် တာပေါ့
အားကစားလည်း သူ ဝါသနာပါလို့ေဘောလုံးပွဲလည်းလောင်းတယ်လေ
မကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေနဲ့လည်း သူ မရှုပ်ဘူးတဲ့။
ကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေနဲ့ပဲ့ ရှုပ်တာတဲ့။
ဘာပဲ့ဖြစ်ဖြစ် သမီးကို သူချစ်သလို သမီးကလည်း သူ့ကိုချစ်တယ်။
ဟိုနေ့ကဆို သမီးပါးမှာ ခြင်တစ်ကောင်နားနေလို့သမီးကို ခြင်ကိုက်မှာ စိုးရိမ်ပြီသူ့လက်နဲ့ ဖျန်းကနဲရိုက်ပလိုက်တာ သွားနှစ်ချောင်း ကျွတ်သွားတယ်။မိဘဆိုတာ သားသမီးကို စိတ်ဆိုးလည်း ခဏတဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ရှင်ပညာသာမိ ပြောဖူးတယ်။
မိဘတွေက မြေးမျက်နှာမြင်ရင် အရည်ပျော်ရောတဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း အမေတို့အဖေတို့မြေးမြစ်တွေ ပွေ့ချီနိုင်အောင် သမီးတို့ကြိုးစားမှာပါ။
အမေတို့ ဒီစာကို ဖတ်နေချိန်မှာ သမီးက လေယာဉ်ပျံကြီးစီးပြီး ဟိုးအဝေးကိုသွားနေပြီ မထင်လိုက်ပါနဲ့။
သမီးအခု စီးနေတာ နွားလှည်းလိုလိုစက်အင်ဂျင်မကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကယ်စုပ်ပေါ်မှာပါ။
ကျေးလက်သဘာဝကို သမီး ချစ်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် ပကာသနနဲ့ စည်းစိမ်ဥစွာတွေကိုလည်းမမက်တော့ပါဘူး။
တစ်နေ့ကျရင် သမီး အဖေတို့ အမေတိုရှိရာအိမ်ကို ဆက်ဆက် ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။
အမေတို့ အဖေတို့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဖြစ်ဖို့လည်း သားသား မီးမီးလေးတွေ လက်ဆောင်အနေနဲ့ ပြန်လာရင်ယူလာခဲ့ပါ့မယ်…!!
Previous Article ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ ဖြစ်ရပ်နောက်ကွယ်က စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာတခု
Next Article ကိုယ်သွားနေကြ မာဆတ်က ကြယ်စင် လမင်း တို့ဖမ်းခံရလို့တရားသူကြီးက ပြန်ပီး အမိန့်ချရသောအခါ…..
ကျန်းမာရေးမကောင်းသောမိခင်ကိုစောင့်ရှောက်နေသောသမီးဖြစ်သူအား ပထွေးဖြစ်သူမှ မိန်းမအလစ်တွင်… See more